November, 21-2015 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO A FRIEND
21-11-2015 Radio XamarWarbaahinta Dalka Kenya ayaa ku warantay in Ciidamada Itoobiya ee ku sugan xadka ay Wadaagaan Wadamada Kenya iyo Itoobiya ay dileen Sadax askari oo katirsan Ciidamada Kenya kadib iska hor imaad halkaasi ka dhacay.
Ciidamada Kenya oo wata taangiyo iyo hub kale oo culus ay ka dhaqaaqeen xero kutaala Deegaanka Mooyaale, iyagoona aaday dhinaca xadka ay wadaagaan Itoobiya iyo Kenya ee lagu dilay askarta kasoo jeeda Dalka Kenya.
Xiisad ayaa ka taagan Xadka Labada Wadan wadaagaan gaar ahaan Deegaanka Sololo uu ka dhacay weerarka lagu dilay askarta katirsan Ciidanka Kenya , waxaana jirta cabsi laga qabo in ciidamada ay isku dhacaan.
Ciidamada Itoobiya ayaa sheegay in Xadka Kenya ay kasoo weeraraan Dagaalyahano hubeesan oo katirsan Jabhada Xoreynta Qoomiyada Oromiya , Jabhadan ayaana weeraro kala duwan ku qaaday Ciidamada Milatariga Itoobiya.
Wararka ka imaanaya Xadka Kenya la wadagato dalka Itoobiya ayaa sheegaya in Ciidamada Itoobiya ay shalay sidoo kale soo galeen Deegaano kuyaala Xadka Kenya , waxa ayna halkaasi ka wateen in ka badan 20-qof oo Kenyan ah.
Ma ahan markii ugu horeesay oo Ciidamada Itoobiya ay ka gudbaan xadka ay lawadaagaan Dalka Kenya ayna howlgalo ka sameeyaan Gudaha Kenya, waxa ayna marar kala duwan ay tageen Deegaano iyo Degmooyin kuyaala Gudaha Kenya sida Mooyaale, Sololo